युट्यूबको लागि ब्यानर कसरी बनाउने? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 381
हाम्रो यूट्यूब च्यानल निजीकृत गर्न सिक्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ यदि हामी यो लोकप्रिय भिडियो प्लेटफर्मको बीच बढ्न चाहान्छौं भने। यदि तपाईं आफूलाई सामग्री निर्माणको लागि पूर्ण रूपमा समर्पण गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो राम्रोसँग डिजाइन गरिएको च्यानल क्रमबद्ध गरेर सुरु गर्न आवश्यक छ।
हाम्रो लेखमा आज हामी तपाईंलाई केहि व्यावहारिक सल्लाहहरू देखाउँदैछौं जसले तपाईंलाई तपाईंको युट्यूब च्यानलको लागि उत्तम ब्यानर बनाउन सहयोग गर्दछ। हाल विभिन्न उपकरणहरू छन् जुन तपाईंलाई उत्तम ब्यानर डिजाइन गर्न मद्दत गर्दछ, र यहाँ हामी ती मध्ये केही उल्लेख गर्नेछौं।
ब्यानर के हो?
यो हामीले थाहा पाउनु पर्ने मुख्य चीजहरू मध्ये एक हो युट्यूबको लागि ब्यानर कसरी बनाउने भनेर सिक्नु अघि। जब हामी शब्द "ब्यानर" को कुरा गर्छौं हामी एक प्रमुख च्यानलको प्रकारलाई संकेत गर्दैछौं जुन एक निश्चित च्यानललाई पहिचान गर्न कार्य गर्दछ।
ब्यानर विशेषता को लागी, अन्य चीजहरु को लागी, यसको उल्लेखनीय आकार को लागी। प्रोफाईल फोटो वा लोगोसँग तुलना गर्दा यो मुख्य भिन्नता हो जुन सामान्यतया सानो र अधिक सटीक हुन्छ। ब्यानर हाम्रो च्यानल को शीर्ष मा स्थित छ।
राम्रोसँग डिजाइन गरिएको ब्यानर यो हाम्रो च्यानल को लागी नयाँ ग्राहकहरु लाई पकड्न उत्तम हुक हुन सक्छ। त्यसकारण यो कसरी सिक्नु आवश्यक छ कि कसरी मूल आँखा बनाउने र सार्वजनिक आँखामा चाखलाग्दो सिर्जना गर्ने। यस तरीकाले हामी हाम्रो ब्रान्डको राम्रो स्थिति प्राप्त गर्नेछौं।
हामी सबैको आफ्नै ब्यानर हुन सक्छ
त्यहाँ केहि विचार छ कि ब्यानर बनाउनु भनेको केवल व्यापार ब्रांडका लागि कार्य होजे होस्, हामी सबै एक गर्न सक्छौं। व्यक्तिसँग व्यक्तिगत ब्रान्ड पनि हुन सक्दछ र मध्यम र दीर्घकालीन अवधिमा विकास हासिल गर्न हामीले यसमा समय लगानी गर्नै पर्दछ।
यदि तपाईंसँग यूट्यूब भित्र व्यक्तिगत च्यानल छ भने, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले प्रत्येक प्रविष्ट गर्न सुरू गर्नु भयो तत्वहरू तपाइँको ब्रान्ड पहिचान गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि:
र पक्कै पनि ब्यानर
उत्तम ब्यानर कसरी बनाउने
जब युट्यूबका लागि सबै भन्दा राम्रो ब्यानर सिर्जना गर्दा, यो हाम्रो कल्पनाशक्ति र रचनात्मकता सहित धेरै मुख्य पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ।। बिर्सनुहोस् कि ब्यानर बनाउन एक डिजाइन मुद्दा हो, त्यसैले रचनात्मकता आवश्यक छ।
राम्रो डिजाइन कार्यक्रम वा अनुप्रयोग छनौट गर्न पनि यो आवश्यक छ। भाग्यवस वेबमा हामी धेरै विकल्पहरू फेला पार्दछौं, ती मध्ये केही पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र। प्रयास गर एउटा अनुप्रयोग छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई तयार टेम्पलेट्स प्रदान गर्दछ, जहाँ तपाईं केवल सानो विवरण परिमार्जन गर्न छ।
यो महत्वपूर्ण छ हाम्रो ब्यानर को आकार को ख्याल राख्नुहोस् युट्यूबको लागि। सम्झनुहोस् कि कुन उपकरणमा तपाइँले देख्नुहुन्छ यसको आधारमा तपाइँको ब्यानर कस्तो देखिनेछ। यो रिंगको प्रकार, फन्ट र छविहरूको आकार कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जान्नको लागि महत्वपूर्ण छ जुन तपाईंले आफ्नो ब्यानरमा घुसाउन लाग्नु भएको छ।
तपाईं केहि राख्न सक्नुहुन्छ? शब्दहरू जुन तपाईंको च्यानल वर्णन गर्दछ। त्यसोभए मानिससँग तपाईंको विषयवस्तुमा विकास गर्ने शीर्षकहरूको एक संक्षिप्त सिंहावलोकन हुनेछ र उनीहरूलाई आकर्षण महसुस भएको खण्डमा सदस्यता लिन सक्नेछ।
युट्यूबमा ब्यानर अपलोड गर्नका लागि चरणहरू
बनाउनुहोस् क्लिक गर्नुहोस् तपाइँको प्रोफाइल तस्वीर को बारे मा
स्थानहरू डिजाइन सेक्सन र तपाईंले आफ्नो च्यानलको लागि डिजाइन गर्नुभएको ब्यानर अपलोड गर्नुहोस्।
1 ब्यानर के हो?
2 उत्तम ब्यानर कसरी बनाउने
3 युट्यूबमा ब्यानर अपलोड गर्नका लागि चरणहरू